ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Qingdao Topwell Chemical Materials Co. , Ltd.
Qingdao Topwell Chemical Materials Co. , Ltd. ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ သုတေသန၊ ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်အထူးပြုလုပ်ထားသောအထူးခြယ်ပစ္စည်းနှင့်ဆိုးဆေးများကိုအသုံးပြုသည်။ အလင်းရောင်အမျိုးမျိုးနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည် - ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၊ အနီအောက်ရောင်ခြည်အနီး (IR)၊ မြင်နိုင်သောအလင်းရောင်။
၁။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် / IR ချောင်းဆေးနှင့်ဆိုးဆေး
3. Photochromic ဆိုးဆေးနှင့်ခြယ်ပစ္စည်း,
5. Thermochromic ခြယ်ပစ္စည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မှန်ဘီလူးမှန်ဘီလူးနှင့်ပြတင်းပေါက် (သို့) ကားဖလင်အတွက်ဖန်လုံအိမ်ဆေးများ၊ အစိမ်းရောင်အိမ်ရုပ်ရှင်နှင့်ကားအထူးအစိတ်အပိုင်းများ၊ ရှည်လျားသောတိုတောင်းသောခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဖြာထွက်ရောင်ခြယ်ပစ္စည်းနှင့်လုံခြုံရေးပုံနှိပ်စက်ရုံအတွက် IR ခြယ်ပစ္စည်းများ၊ , အပြာအလင်းစုပ်ယူ, filter ကိုဆိုးဆေးများ, ဓာတုအလယ်အလတ်, အလုပ်လုပ်တဲ့ဆိုးဆေးများ, အထိခိုက်မခံဆိုးဆေးများ။
အရေးအကြီးဆုံးမှာကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးမျိုးသောပြုပြင်ထားသောဓာတုပစ္စည်းများနှင့်အထူးဆိုးဆေးများအထူးပြုလုပ်ထားသောပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပြုလုပ်သည်။ ဖောက်သည်များအတွက်တင်းကြပ်စွာလျှို့ဝှက်ထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်အမေရိကန်၊ ဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်၊ ဘရာဇီး၊ ဂျပန်နှင့်အခြားနိုင်ငံများသို့မဟုတ်ဒေသများတွင်ကောင်းစွာရောင်းချသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်း၊ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းများ၊ ပထမတန်းစားလက်မှုပညာများ၊
ကမ္ဘာအနှံ့ရှိသူငယ်ချင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသို့ လာရောက်၍ နှစ်ရှည်နှစ်ဖက်အကျိုးကျေးဇူးများကို အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူပူးပေါင်းရန်ရိုးသားစွာကြိုဆိုပါသည်။